Wararka - HMB 2020 Waxqabadka Bullying
Yantai Jiwei 2020 (Xagaaga) "Wadajirka, Isgaarsiinta, Iskaashiga" Waxqabadka Bullying Team
11th Julaay, 2020, HMB lifaaqa warshad wuxuu abaabulay Waxqabad Bullying ， Kaliya ma nasan karo oo ma mideyn karaa kooxdeena, laakiin sidoo kale wuxuu u oggolaanayaa qof kasta oo naga mid ah inuu si fiican u fahmo waxa ay yihiin shuruudaha koox guuleysta In kastoo waxqabadyadu muddo gaaban soconayaan, waxay noo keeneen fikrado badan, gaar ahaan Sida loogu xiro wixii aan ka baranay ciyaarta iyo shaqada waa su’aal ay tahay inaan ka fikirno.
Waxqabadkani wuxuu ku saabsan yahay hal-ku-dhigga "Isku-xirnaanta, Wada-xiriirka, iyo Wada-shaqeynta", oo ujeedadeedu tahay in lagu kobciyo isku-xirnaanta shaqaalaha iyo guud ahaan xoogga hoggaanka. Waxqabadkaani wuxuu ka caawiyaa kooxda lifaaqyada HMB inay xoojiso xiriirka iyo wada shaqeynta dhammaan shaqaalaha HMB. Waxqabadka waxaa ka mid ah daawashada booqashooyinka iyo ciyaarta ka-hortagga Weerarka.
Intii aan ku guda jirnay booqashada, waxaan booqannay goob dalxiis caan ah oo ku taal Yantai oo la yiraahdo macbadka "WURAN". Dhammaan shaqaalaha HMB waxay ku riyaaqeen buuraha quruxda badan iyo muuqaalka biyaha, waxayna fasax u qaateen jirka iyo maskaxda shaqada iyo nolosha mashquulka badan, oo ahayd mid aad u faraxsan.
Markii la ciyaarayay ciyaarta 'Counter-Strike' ', qof walba wuxuu u qabtay si wanaagsan, xubnaha kooxdu way midoobeen midba midka kale, waxay qaateen xeelado dabacsan, way is caawiyeen, waxayna hagaajiyeen awoodaha dagaalka ee kooxda oo dhan. Ciyaartan dhexdeeda, Ciyaartan dhexdeeda, waxaan ku ogaan karnaa taas xaalado badan kuma filna inaan ku tiirsanaano oo keliya xooggeenna shaqsiyeed. Wadashaqeyntu waa qayb muhiim ah oo kooxda ka mid ah. Kartida shaqsiyadeed ee shaqaale badan ayaa loo xiiray si loo wanaajiyo awooddooda ay kula tacaali karaan dhibaatooyinka. Marka laga hadlayo shaqada, waa inaan qabanaa shaqadeena qof kasta oo inaga mid ah. Waxaan ubaahanahay waa iskaashi dhexmara. Dhamaanteenna waxaan ognahay in, "Isku duubnaanta, Wadahadalka, Iskaashiga" ay naga caawin karaan inaan wax walba u qabano sida ugu fiican.
Hawlaha dhismaha kooxeed ee ay soo abaabushay shirkaddu waa xiriir aad u wanaagsan oo ka dhexeeya shaqada iyo xilliyada firaaqada. Nasashada jirka iyo maskaxdu waxay u oggolaan kartaa xubnaha kooxda inay dib u ururiyaan xooggooda oo ay naftooda u huraan shaqada mustaqbalka. Yantai Jiwei Dhismaha Mashiinka Qalabka Co., Ltd. runtii waa jaceyl weyn. qoyska.